Ndatenda, Mr. Mabasa | Martech Zone
Chitatu, October 5, 2011 Mugovera, October 25, 2014 Douglas Karr
Kubatikana kwangu ne apuro yakatanga apo shamwari yangu Bill Dawson nemukadzi wake, Carla Ybarra-Dawson akanditengera AppleTV gore rimwe chete. Uku ndiko kwaive kutanga… izvozvi vana vangu vane MacBook Pros nePhones, hofisi yangu izere neCinema Displays, iPads, imwe AppleTV, iMac neMac Mini Server. Mira nehofisi yedu imwe nguva wozvitarisa.
Shamwari dzangu zhinji dzakandiseka dzave neApple… kusanganisira Doug Theis, Adam Small, naJenni Edwards. Handina kutaura navo mazviri. Muchokwadi, kazhinji yenguva, ndaifanira kudzivirira iyo yakawedzerwa mari. Imhaka yekuti hazvisi zveApple Cult kana kuyedza kutaridzika kana kupokana neMicrosoft (Ini ndinoda Microsoft!) Kana kuratidza kuti ndashandisa mari yakawanda kupfuura zvaitwa nemumwe munhu… zvaive nekuti kutakura Apple hardware kwakaramba kuchindikurudzira kusabvumirana pane zvisina kufanira.
Zvakaitwa naSteve Jobs naApple zvakanditadzisa kutarisa komputa sechishandiso ndokutanga kundiita kuti ndifunge nezvazvo sebhurasho rependi kuti ndiite mucherechedzo wepasi.
Ini ndoziva izvo zvinoita kunge hokey, asi kurudziro iriko. Sezvo ini ndakura bhizinesi rangu, ndakadzidza kuti pese pandinorerutsa, zvakafanana nekugogodza chip kubva pabasa rehunyanzvi. Pakupedzisira, kambani ichataridzika sevamwe vakarova, chembere, yakachipa chunk yekukara. Ini handidi kuti kambani yangu itaridzike saizvozvo. Saka handisi kurerutsa. Ndarasikirwa nedzimwe shamwari pamusoro pazvo. Ndarasikirwa nemumwe wangu webhizinesi pamusoro pazvo. Ndarasikirwa nevamwe vatengi pamusoro payo. Ndinovasuwa vese… asi ndinoziva ndanga ndichiita chinhu chakarurama. Bhizinesi rangu rinoramba richikura uye richikwezva vatengi vakuru uye vari nani. Ndine shamwari dzakanamatira neni kuburikidza nazvo. Ndine mamwe mabhizinesi anoramba achindiitira moyo murefu;). Isu tese tinoziva tiri kuenda munzira kwayo.
Kunze kwekugadzirwa kwehardware yake uye software, nyaya yega yega yandaiverenga nezva Mr. Jobs yaive yekuti aisazombokanganisa. Zvese zvaifanirwa kuitwa zvirinani zvishoma, zvishoma kuonda, kumhanyisa zvishoma ... ZVESE. Vazhinji vanhu vepedyo naye vanoti anga achirwadza muchibato chekushanda nacho… asi hapana kana chavaimbochinjanisa nacho.
Ini handina chero hukuru zviratidzo zve Highbridge kuva anotevera Apple, asi kunyangwe mukati mediki dandemutande reshamwari, vaverengi, uye vandinoshanda navo, ndinotarisira kuti ndingavaita vafunge zvakatosiyana pane zvinoita vamwe.
Tags: apuroapple tvbhiri dawsonkufa kwemabasa stevemabasa stevesteve mabasa rufu
Mutengi vs Bhizinesi Maitiro muSocial Media
Econsultancy Inoburitsa B2B Yemukati Yekutengesa Nhungamiro
Gumiguru 5, 2011 na9: 14 PM
Wataura zvakanaka mukoma. Amen naMwari speed Steve.
Gumiguru 5, 2011 na9: 22 PM
Kusiyana nezvingafungwa nevakawanda nezvemaonero angu, ndakakoshesa Apple uye zvigadzirwa zvayo. Sezvawakataura, chandisina kufarira yaive fanboy-Kool-aid-inwa-kunamata-sekutevera kwevazhinji vevateveri vayo. Ini ndinobvumirana zvachose nehunyanzvi, hunyanzvi uye kurudziro iyo Steve Jobs anoita kunge akakwanisa kuve iyo inokonzeresa mune dzakasiyana nzira dzakasiyana. Achashaikwa.